ငါဘယ်သူလဲ? အပိုင်း 1: တင့်တယ်ဒါပေမယ့် Broken — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါဘယ်သူလဲ? အပိုင်း 1: တင့်တယ်ဒါပေမယ့် Broken
ဤဗီဒီယိုအား Batesville အတွက်တပည့်ယခုကွန်ဖရမှဖြစ်ပါတယ်, ဒေါ်. ဗီဒီယိုနှင့်အသံအရည်အသွေးကခွင့်လွှတ်ပေးပါ
ဒီတနင်္ဂနွေကျွန်တော်တို့ဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်တာပေါ့. ဒါကသင့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ငါ့ကိုမေးတယ်ဘာ, ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာတွေမသိဒီပြီးသားငါ့နှလုံးအပေါ်ဖြစ်သည့်အရာတစ်ခုခုနှင့်ငါစဉ်းစားခဲ့ကြရတယ်ကြောင်းကိုဖြစ်ပါသည်. ငါ D.C ၌ငါ၏အသင်းတော်ကိုကြားမှာလူငယ်အုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူကအကြောင်းပြောဆိုသောင်. အတော်လေးနည်းနည်း.
ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဝိသေသလက္ခဏာငါ့နှလုံးအပေါ်ခဲ့သည်? ဒါကြောင့်သင်မည်သူကိုသိရန်ဒါအရေးကြီးတယ်ငါထင်ကြဘူးအဘယ်ကြောင့်? သင်၌နေသောသူမသိရပါဘူးလျှင်ကြောင့်,, သငျသညျသငျသညျအသကျရှငျဖို့ထင်နေပုံကိုမသိကြပါ.
အဆိုပါ Bourne Identity ကိုစဉျးစားကွညျ့. ဤသူသည်တစ်လှေပေါ်တက်နှိုးနှင့်သူသည်အဘယ်သူသည်မသိရပါဘူး. သူကတစ်ဦးသဲလွန်စတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်မှဝင်. သူကတစ်ဦးရန်ပွဲအတွက်ရရှိသွားတဲ့သူကတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားင်သိ. သငျသညျကျပန်းသငျသညျလြှို့ဝှကျ Ninja ကိုကျွမ်းကျင်မှုခဲ့ထုတ်ကိုတွေ့လျှင်အရူးမဖွစျပါ့? ရုပ်ရှင်၏ကျန်သူသည်သူသူသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခရီးရဲ့. သူဟာပင်အကြောင်းကိုမသိခဲ့ပါအမှုအရာနိုင်စွမ်းရဲ့. ဒါပေမယ့်သူကမသိရပါဘူးဆိုရင်, သူတကယ်ဖြစ်သကဲ့သို့သူအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
ငါသည်ဤအခန်းတွင်မည်သူမဆိုလျှို့ဝှက်ချက် Ninja ကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်ဟုမယူဆကြဘူး, ငါတို့သဝိသေသလက္ခဏာကိုစဉ်းစားရန်အဘို့အဒါပေမယ့်နေဆဲအရေးကြီးပါတယ်.
ငါတို့သည်ငါတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုထွက်သယ်ဘယ်လိုနှင့်အတူလုပ်ဖို့သိပ်ရှိပါတယ်ရိပ်မိပုံကို. ငါဆိုလိုတာက, သင်လူသားတစ်ဦးဖြစ်လျက်ရှိအဖြစ်နေသောသိပြုပါ? ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? သင်သည်ဤအရပ်၌နေအဘယ်ကြောင့်သင်သိပါနဲ့, အဘယျသို့သင်တို့၏အရေးပါမှုသည်, သငျသညျနိုင်စွမ်းပါတယ်အဘယျသို့, သင်သည်အဘယ်သို့ကျင့်ကိုကျင့်ခံရဖို့ထင်နေ? သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ပင်တည်ရှိပါဘူး? မင်းဘယ်သူလဲ? ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းတွေကိုမဖြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဖြုန်းနိုင်, တစ်စုံတစ်ဦးအဖြစ်နေထိုင်နေ.
ဒါဟာလိုလားတဲ့အားကစားသမားဒဏ်ရာရရှိရသောအခါအရှက်ကွဲခြင်းရဲ့သို့မဟုတ်အနားယူရန်ရှိသည်, ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကို၏ကျန်များအတွက်ပျောက်ဆုံးနေ. ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအချိန်သူတို့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ရပ်အားကစားသမားဖြစ်ခြင်းခဲ့သည်ထင်သောကြောင့်. ဒါကအခြားသူများကိုသူတို့ကိုကုသပုံကိုဖွင့်, ထိုသို့သူတို့နှုတ်ဆက်ပြီးဘာ. ဒါကြောင့်သူတို့နေသောင်လျှင်, သောသူတို့သည်သို့သူတို့ဘဝသွန်းလောင်းပါလိမ့်မယ်ဘာ. ယခုမှာအပျောက်င်သောသူတို့သည်အသက်ရှင်ဖို့ဘာမျှမရှိသည်.
ထိုအကြားဆက်ဆံရေးမှဆက်ဆံရေးမှသှားတဲ့သူလူငယ်မင်းသမီးရှိပါတယ်, သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်နှင့်အတူအစွဲအလမ်းဖွစျလာသူ. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာယောက်ျားတွေကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းတော်တော်လေးမိန်းကလေးဖြစ်ခြင်း၌ထခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်ထင်သောကြောင့်. ထိုလူကြိုက်များ်လည်းကြွေတတ်ကြသောအခါ, သူတို့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရပါတယ်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတွေ့ဘယ်မှာဒါကင်. သင်၌နေသောသူအကြောင်းရှုပ်ထွေးဆိုရင်, သင်နှင့်အတူလုပ်နေသင့်ပါတယ်အဘယျသို့အကြောင်းမရောထွေးပါလိမ့်မယ်ဘဝ-နှင့်ကြေကွဲဖွယ်ရလာဒ်များရှိသည်နိုင်.
ငါသည်သင်တို့နေသောသငျသညျဟုမေးလျှင်သင်အဘယ်သို့ပြောမယ်လို့? ကျောင်းသားသမဂ္ဂသို့မဟုတ်အားကစားသမားသို့မဟုတ်ရက်ပ်သို့မဟုတ်သင်းအုပ်ဆရာ? အဘယ်သူမျှမ, သူတို့သည်သင်ပြုပါအရာဖြစ်ကြ၏. မင်းဘယ်သူလဲ?
ငါတို့သည်ဤလောကကျွန်တော်တို့ကို define မသွားပါစေနိုင်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ကို define မသွားပါစေနိုင်ပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏မိဘများကျွန်တော်တို့ကို define မသွားပါစေနိုင်ပါတယ်. သူကဒီကိစ္စကိုအပေါ်အခွင့်အာဏာရဲ့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဘုရားသခငျကျွန်တော်တို့ကို define ကြကုန်အံ့ရန်ရှိသည်. ကျနော်တို့နေသောမသိလျှင်, ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုအသက်ရှင်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြရာလမ်းကိုအသကျရှငျမနိုင်.
ငါကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကျမ်းစာ၌ကပြောပါတယ်အကြောင်းသန်းအမှုအရာနှုတျဆကျနိုငျခဲ့, ငါမူကားသုံးထဲသို့ကိုဝေခဲ့ရတယ်. ကြှနျုပျတို့သညျဤအစည်းအဝေး၌အကြောင်းပြောဆိုပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းကျွန်တော်တို့လှပစေကြကြောင်း, ဒါပေမယ့်လည်းကျိုး. သောဤအစည်းအဝေး၏အဓိကအချက်င်: ကြှနျုပျတို့အားလုံးလှပစေကြ, ဒါပေမယ့်လည်းကျိုး.
ထိုအခါငါဆာလံကြည့်ချင် 139 ပဌမ. သင်သည်သင်၏ကျမ်းစာရှိပါကထိုအရပ်၌လှည့်. သငျသညျလှည့်နေချိန်တွင်ငါသည်သင်တို့ကိုအချို့သောအကျဉ်းနောက်ခံပေးလိမ့်မယ်.
ဤသည်မြေတပြင်လုံးဆာလံတစ်ချိန်တည်းမှာဘုရားသခင့နေရာတိုင်းအရာအားလုံးကိုသိတယ်နဲ့ဘယ်လောက်အကြောင်း. ဒါဝိဒ်သည်ထိုင်သောအခါသူသိတယ်, သူထကြသောအခါ. သူကပြောပါတယ်ရှေ့၌ဆိုရမယ့်ဆိုတာကိုတော့. သူသည်ထိုအတစ်ချိန်တည်းမှာနေရာတိုင်းင်. သူကကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူင်, သူကမြေကြီးပေါ်မှာင်, သူကနေရာတိုင်းင်. တဖန်ဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင့ချီးမွမ်း.
ထိုအခါကျမ်းပိုဒ်များတွင်စတင် 14 သူသည်ဖန်ဆင်းရှင်အဖြစ်ဘုရားသခငျသညျခြီးမှမျး. ထိုအခါသူကငါတို့နေသောသို့ကိုသဲလွန်စပေးသည်.
ထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နှင့်လုပ်နေပါတယ်သောကြောင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုချီးမွမ်း; သင်၏အကျင့်ကိုအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်, ငါအပြည့်အဝကောင်းစွာသိကြ. ငါဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌လုပ်သောအခါငါ့အဘောင်သည်သင်တို့ထံက hidden မခံခဲ့ရ. ငါသည်မြေကြီးများ၏နက်နဲသောပင်လယ်၌စည်းဝေးယက်သောအခါ, သင်၏မျက်စိသည်ငါ့ unformed ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်လျှင်. သူတို့ထဲကတဦးတည်းဖြစ်မရောကျမှီအကြှနျုပျအဘို့စီရင်သည်ကာလပတ်လုံးသင့်ရဲ့စာအုပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့ကြသည်. (ဆာလံ 139:14-16, င်း)
ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်. ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများ၏ Starting Point သို့င်, ကျွန်တော်တို့လည်းအဖြစ်မှန်၏အလငျး၌နထေိုငျသငျ့သ​​ညျ.
ယခုငါကဒီမှာလူအများစုကယနေ့ညဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင်းနာ​​းလည်ယူဆတာပါ. ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမိမိကိုယျကိုဖန်တီး. များစွာသောပြောတဲ့စကားကိုဆန့်ကျင်, ကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ဤနေရာတွင်မဟုတ်ပါဘူး. ဒါကြောင့်အလှမ်းဝေးနှင့်မယုံနိုင်စရာဖွင့်. ကျနော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုရားသခငျသညျအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြ. ထိုတစ်ဦးအရေးအရာမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ၌တစ်ဦးခြားနားချက်ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အထောက်အထားတွေကိုပုံစံသွင်းသွင်း.
သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်တီးမယ့်အခိုက်အဘို့စိတ်ကူးချင်တယ်. သငျသညျကျပန်းအခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ကဒီမှာနေ. သင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအဘို့အဘယ်သူမျှမရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်. အခုတော့ထိုမေးခွန်းကိုဖြေဆိုဖို့ကြိုးစား, သင်တို့အဘို့အဤနေရာတွင်ဘာတွေလုပ်နေလဲ? သူတို့တစ်တွေကျပန်းမတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်လာကြသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအားလုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်တန်ဖိုးဆုံးရှုံး. ဒါကမိသားစုကယ့်ကိုဘာမှမဆိုလိုပေဆိုလိုသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားအကြိုးရှိပါတယ်, ငါ၏အခက်ခဲကြိမ်မျှရည်ရွယ်ချက်ရှိ. ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမြင်နိုင်ရန်တော်တော်စိတ်ပျက်ဖွယ်လမ်းဖွင့်. ထိုအကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒါကြောင့်သစ္စာကိုဖျက်မယ့်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်ကသူ့စကားလုံးကိုကိုယ်တော်တိုင်ပြတော်မူပြီ.
သင်၌နေသောသူအကြောင်းအများကြီးကပြောပါတယ်မှလာအဘယ်မှာရှိ. ဒါကြောင့်ငါကထူးဆန်းတဲ့ device ကိုရှာပြီးငါကအတူဘာလုပ်ရမှန်းထွက်တွက်ဆမနိုင်လျှင်, မေးမြန်းဖို့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသောသူသည်? ဖန်ဆင်းသူ. သူတို့ကငါ့ကိုအဘယျအကနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကဖွင့်ပြောပြနိုင်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်ထံမှစကားကိုနားထောငျခငျြ, အဘယ်သူသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်.
ကျမ်းပိုဒ်များတွင် 14, ဒါဝိဒ်သည်သူကပြောပါတယ် "ကြောက်လနှင့်အံ့သြဖွယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ " ထိုသာမညဘာ?
ဒါကြောင့်ကြောက်လကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့ဘာကိုဆိုလို? ဘုရားသခင်ကပဲအတူတူကျွန်တော်တို့ကိုပစ်မပြုခဲ့ဆိုလိုသည်. ဒါဟာသူ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ခဲ့သည်. သူကကြီးမြတ်ဂုဏ်အသရေနှင့်ရင်သပ်ရှုမောနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်. ဒါဟာလူတွေကိုသိမ်းကျုံးသို့မဟုတ်ကျပန်းမဟုတ်ခဲ့. သင့်ရဲ့မျက်လုံးပြာရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာ, သို့မဟုတ်သင့်အညိုရောင်အသားအရေ, သို့မဟုတ်သင့်ရှည်လျားသောခြေထောက်များ. ဒါကြောင့်အားလုံးရည်ရွယ်ချက်အပေါ်ခဲ့သည်.
ငါအလယ်တန်းကျောင်းအတွက်အနုပညာအတန်းထဲတွင်ဖြစ်ခြင်းသတိရ, ငါဖန်ဆင်းအရာအားလုံးကိုကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့မရညျရှယျအပေါ်. ငါ့အမေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်၌ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအပေါ်ရှိပါတယ်ဒီပန်းကန်ရှိပါတယ်. ဒါဟာသင်သည်အစဉ်အမြင်ရပါလိမ့်မယ်အ ugliest အရာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာငါပိုကောင်းလုပ်နေတာနိုင်စွမ်းမဟုတ်ခဲ့မင့်. ငါကအကြောင်းလုံလောက်ဂရုမပြုခဲ့သောကွောငျ့ကယ့်ကိုကဖို့အချိန်ပေးဖို့င်. ကိုယ့်ဒါငါသည်ငါ၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူစကားပြောနိုင်ကြောင်းဖွင့်မြန်မြန်နဲ့ပြီးအောင်ချင်တယ်. ဘုရားသခင့ကျပန်းအတူတူကျွန်တော်တို့ကိုပစ်ဘူး. သူကကြီးမြတ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူပြု. သူကဂရုတစိုက်သင်လက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်. လိမ္မာပန်းပုဆရာများ၏စဉ်းစားပါ, မိမိအလက်ရာလှပသောအထိဂရုတစိုက်ကွာထုလုပ်သော.
ထိုအခါဒါဝိဒ်သည်သူက "အံ့ဩဘွယ်သောဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ " ခဲ့ပြောပါတယ်ဒါဟာသူကိုကြီးစွာသောအလုပ်ကိုပြုဆိုလိုသည်. ကျနော်တို့အံ့သြဖွယ်သတ္တဝါများဖြစ်ကြသည်. လူ့သတ္တဝါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကြ.
သူကဆိုအပေါ်တတ်, “သင်၏အကျင့်ကိုအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်, ငါကအပြည့်အဝကောင်းစွာသိကြ၏။” သူကသူ့ရဲ့အံ့သြဖွယ်အမှုအရာသည်ဘုရားသခင်၏ချီးမွမ်း. ဘုရားသခငျသညျအံ့သြဖွယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပါသည်. သူကအံ့သြဖွယ်အမှုတို့ကိုပြုမယ့်. ငါတို့သည်ဘုရားသခင့သူတွေကိုအံ့သြဖွယ်အမှုအရာတို့တွင်အများမှာ. တကယ်တော့, ငါတို့သည်သူတို့အားလုံး၏အရှိဆုံးအံ့သြဖွယ်ပါပဲ.
သငျသညျမိမိအအံ့သြဖွယ်အမှုအရာသည်ဘုရားသခင်၏သူထိုက်ဘုန်းအသရေပေးကမ်းခဲ့ကြရတယ်လျှင်ငါတွေးမိ? လူ့သတ္တဝါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကြ. ဆရာဝန်များနေဆဲလူ့ခန္ဓာကိုယ်သောရှုပ်ထွေးသောစနစ်အားနားလည်ရန်ကြိုးစားနေ. တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကငါသည်ငါ့အဆုတ်ထဲမှာမျက်ရည်နှင့်ရှူရှိုက်နိုင်ဘူး. ငါဆေးရုံအိပ်ရာ၌အိပ်, ငါ့ကိုယ်ပြီးသားကပြုစုစောင့်ရှောက်မှုယူပြီးကြောင့်နှင့်ဆရာဝန်များဘာမှလုပ်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ. ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့ငါဒဏ်ငွေခဲ့သည်. ကျနော်တို့အံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်. ကျနော်တို့ကျိုးကြ, သို့သော်အံ့သြစရာ.
ဒါပေါ့, လူမနိုင်ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များလုပျနိုငျသောအရာတို့ကိုဖော်ပြထားခြင်းစေခြင်းငှါ, ပိုမိုမြန်ဆန် run သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအစှမျးသတ်တိရှိနိုငျသောတိရစ္ဆာန်နှင့်တူ. ကျနော်တို့ဖန်ဆင်းခြင်း၏အများဆုံးအံ့သြဖွယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဘယ်လိုသိကြပါ?
ကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးနေ! အဘယ်သူမျှမတိရိစ္ဆာန်, သို့မဟုတ်စက်ရုံ, ပွညျသူပွညျသားသို့မဟုတ်အပိုင်းအစ, သို့မဟုတ်ဂြိုဟ်ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာနေသူများကဖန်တီး. သူကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်စေ! ဘုရားသခင်သည်သူ၏ဘုန်းအသရေကိုချွတ်ပြသနိုင်ဖို့အရာအားလုံးကိုဖန်တီး, ကျွန်တော်အများဆုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုချွတ်ပြသနိုင်ဖို့ရရှိသွားတဲ့ကဖန်ဆင်းခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်, ငါတို့သည်သူ့ကိုအတူလုပ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းပါပဲကွောငျ့,.
အခုတော့အဲဒီအကြောင်းစဉ်းစား. သောဘဝ၌သင်တို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်င်: ဘုရားသခင့ချွတ်ပြသနိုင်ဖို့. ငါရုပ်ပွားတော်မှကျွန်တော်တို့ကိုနှိုငျးယှဉျတစျခုစာရေးသူဖတ်. ကျနော်တို့ဖန်ဆင်းခြင်း၌ဘုရားသခင်ရုပ်တုတူပါပဲ. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူ့ကိုတူနေ. ငါတို့သည်သူ့ကိုကိုယ်စားပြုကျွန်တော်သူ့ကိုတစ်ပြောင်ပုံမှာပြသရ. ငါကပုံရိပ်တူ.
ဘာဖြစ်သလဲ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်မပြတ်သင်မကျေနပ်မှုဖြစ်ဆုံးမဩဝါဒပေးဖြစ်ပါတယ်. သင်ဤလိုအပ်ပါတယ်. သငျသညျတော်တော်လေးလုံလောက်မဟုတ်ပါဘူး, လုံလောက်တဲ့ရိုက်ကူး, လုံလောက်တဲ့ဂျပိန်, လုံလောက်တဲ့ချောမော, လုံလောက်တဲ့စမတ်, လုံလောက်တဲ့သို့မဟုတ်အားကစား. ကောင်းစွာသင်မစုံလငျနေ, သင်မူကားကြောက်လနှင့်အံ့ဩဘွယ်သောလုပ်နေကြတယ်.
ငါသည်သင်တို့ကိုရှိရောငျ့ရဲရှာဖွေချင်တယ်. အဆိုပါယောက်ျားတွေသို့မဟုတ်မိန်းကလေးသင်ဆွဲဆောင်မှုထင်ပါတယ်မပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင်ကကြောက်လင့်အရာကိုသိနှင့်အံ့ဩဘွယ်သောလုပ်. သငျသညျအထူးချွန်ဆုံးမဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင်မူကားကြောက်လနှင့်အံ့ဩဘွယ်သောလုပ်နေကြတယ်. သင့်ရဲ့ပြက်လုံး corny ဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင်မူကားကြောက်လနှင့်အံ့ဩဘွယ်သောလုပ်နေကြတယ်. သင်တစ်ဦးအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်, အံ့သြစရာ, တန်ခိုးရှင်ဘုရားသခငျ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖန်ဆင်းခြင်း. အလျှင်းမကယူသွားနိုင်ပါတယ်!
ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကကိုယျ့ကိုယျကိုလည်းနည်းနည်းစဉ်းစား. ကျနော်တို့ဘာမှမထင်ပါတယ်. ဒါကတစ်ဦးမုသားင်. သငျသညျကြောက်လနှင့်အံ့ဩဘွယ်သောလုပ်နေကြတယ်. ဘယ်သူ့ကိုမှမဟုတ်ရင်သင်ပြောပြမခံပါနဲ့. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျသို့မဟုတျအခွားသူမြားထင်စေခြင်းငှါအဘယျအထက်ကိစ္စရပ်များအများကြီးပိုပြီးထင်အဘယျသို့.
ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကကိုယျ့ကိုယျကို၏အလွန်အကျွံထင်. Kanye West စဉျးစားကွညျ့. သူကဒုက္ခတွေအများကြီးထဲမှာရရှိသွားတဲ့, ဒါပေမယ့်အရာကသူအခြားသူကိုလူတိုင်းပြီးသားထင်သောအရာတို့ကိုမိန့်တော်မူ၏ဖြစ်ပါသည်. ခေါ်တော်မူခြင်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ် "ငါသည်ဘုရားသခငျတ Am ။ " ဒါကြောင့်များစွာသောလူသူတို့ကိုယ်သူတို့၏ဤအမြင့်မားထင်. ဒါပေမယ့်သင်ရုံတစ်သတ္တဝါများမှာ. ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာလည်းငါတို့အခြားသူများကိုမြင်သလဲဆိုတာအဘို့အသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်. ဘယ်သူကမှအချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်. ဘယ်သူမှအရေးမသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုလူတစ်ဦးကြောက်လနှင့်အံ့သြဖွယ်ဖန်ဆင်းထားသည်. သငျသညျလမျးပျေါမှာကအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ကောင်လေးသောအခါ, သူတစ်ဦးဘယ်သူမှမဖွင့်သတိရ. တစ်ဘယ်သူမှမထိုကဲ့သို့သောအရာရှိတယ်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ Known န
ဒီနေရာမှာရပ်အတွက်ဘယ်သူ့ကိုမှမ? ငါလူငယ်တစ်ဦးသည်သားကို, နှင့်ငါ့ဇနီးနဲ့ကျွန်မကျွန်တော်တစ်ဦးကလေးထိန်းရနိုင်နိုင်အောင်ကြိုတင်သုံးနှစ်တူအချိန်စာရင်းငါတို့သည်ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်သွားကြဖို့လိုတဲ့အခါ. ကျွန်တော်သွားကြောင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားအဘို့ဂရုစိုက်ဖို့လူပေးဆောင်. ကလေးထိန်းသူတို့၏စောင့်ရှောက်မှု၌နေသောအရာတို့ကိုအပေါ်သူတို့မကျြစိကိုစောင့်ရှောက်. ကောင်းပြီဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးဘုရားသခငျရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဖြစ်ပါသည်. ထိုကြောင့်အားလုံးအပေါ်မျက်စိတော်သည်စောင့်ရှောက်, သင်အပါအဝင်.
“ငါဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌လုပ်သောအခါငါ့အဘောင်သည်သင်တို့ထံက hidden မခံခဲ့ရ. ငါသည်မြေကြီးများ၏နက်နဲသောပင်လယ်၌စည်းဝေးယက်သောအခါ, သင်၏မျက်စိသည်ငါ့ unformed ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်တော်မူ၏။” (ဆာလံ 139:15-16)
သူအမိဝမ်း၌ရှိ၏လျှင်ပင်ဘုရားသခငျသညျသူ့ကိုမြင်သည်ဟုဆိုင်. သူကအမိဝမ်းထဲမှာင်စဉ်၏သင်တန်းကိုမည်သူမျှမသူ့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်. သူတို့ဟာသေးသူ့ကိုအကြောင်းကိုအများကြီးမသိရပါဘူး. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုရှုမြင်, သူတစ်ဦးမြေပဲ့အရွယ်အစားခဲ့လျှင်ပင်. ဘုရားသခငျသညျသူ့ကိုပြုစုသည်, သူ့ကိုထော, သူ့ကိုအတူတူ knitting.
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မသူမကိုယ်ဝန်ခဲ့သည်ထွက်ကိုတွေ့သောအခါ,, ကျနော်တို့လာမယ့်တနင်္လာနေ့ဆရာဝန်သွားကြ၏. အကြှနျုပျတို့ပြီးသားတစ်ဦးနှလုံးခုန်နားထောငျတျောနိုင်. သူကဒါသေးသေးလေးခဲ့သည်, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်သူ့ကို ချစ်. သူ့ကိုအောင်ခဲ့သည်. ဘုရားသခင်သည်မိမိအနညျးငယျ unformed ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်လျှင်. ဘုရားသခင်၏အမြင်လှကြောင်းဘာမှမရှိဘူး.
ဘုရားသခငျသညျသငျသညျအကွောငျးကိုမေ့လျော့နေလျှင်, သင်သိလိမ့်မယ်. သူကငါတို့စိတ်နှလုံးကိုရိုက်နှက်နှင့်အဆုတ်အသက်ရှူစောင့်ရှောက်.
ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူအားမျှမမြင်နိုင်ပေ. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုရှုမြင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌နက်ရှိုင်းစွာစိတ်ဝင်စားတယ်. ဤသည်ကိုအမှတစ်ဦးနှစ်သိမ့်ဖြစ်သင့်. ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏မသိကြောင်းဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်ကိုဘာမှမရှိဘူး. အဘယ်သူမျှမစိန်ခေါ်မှုသို့မဟုတ်နာကျင်ရှိပါတယ်. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုထိခိုက်သောအရာတို့ကိုဂရုစိုကျ. သငျသညျပြီးသားသိသာအရေးပါမှု-၎င်းကဘို့စစ်တိုက်စရာမလို.
သင်အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်တီဗီပေါ်တွင်သင်၏နာမကိုအဘယျသို့ထွက်ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်, ကအံ့သြဖွယ်ဖြစ်မလို? သငျသညျကိုသူတို့လက်ကိုလှုပ်တယ်ဘယ်တော့မှရင်တောင်, ဒါကြောင့်သူတို့ကပဲသင်ခဲ့ကြသူအသိလုံလောက်စွာပါလိမ့်မယ်. ဘယ်လောက်ပိုပြီးအံ့သြဖွယ်ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့နေသောသိ. ကလုံလောက်စွာမဖြစ်သင့်ပါဘူး?
“သူတို့ထဲကတယောက်ဖြစ်ဖို့မရောက်မှီအကြှနျုပျအဘို့စီရင်သည်ကာလပတ်လုံးသင့်ရဲ့စာအုပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့ကြသည်။” (ဆာလံ 139:16)
ငါ့အဖေအရူးငါ့ကိုနှင်ကြောင်းငါ့ထံသို့အမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုမျိုးဆိုအသုံးပြု. တဦးတည်းအရာများအတွက်, သူခြိမ်းခြောက်မှုအချို့မျိုးသို့ငါဖန်ဆင်းတိုင်းကြေညာချက်ကိုဖွင့်မယ်လို့. ဒါပေမဲ့သူပွောဆိုဖို့အသုံးပြုအခြားအရာဖြစ်ပါသည်, “ယောက်ျားလေး, ငါသည်သင်တို့ကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်သိထက်သင်ပိုကောင်းငါသိ၏။” ဒါဟာငါ့ကိုဒါအရူးလုပ်လိမ့်မယ်. ထိုအခါမူကားတစျနေ့ကငါကစစ်မှန်တဲ့ခဲ့သဘောပေါက်. အဘယ်ကြောင့်? ငါ၏အနညျးငယျဆိကဦးနှောက်သောအရာတို့ကိုနားမလည်နိုင်သောကြောင့်. ဒါပေမယ့်ငါ့အဖေကိုသိ.
သူပင်မမွေးခင်ဘုရားသခင်ပြုမယ်လို့အရာအားလုံးကိုသိသည်ကပြောပါတယ်. ဘုရားသခငျသညျအရာခပ်သိမ်းကိုထိန်းချုပ်ထားသူအရာအားလုံးကိုသိတယ်. သူသည်သင်၏ခေါင်းကိုအပေါ်များမှာမည်မျှဆံပင်သိတယ်. သူသည်သင်တို့ကိုအခုအချိန်မှာစဉ်းစားနေတာသိ. သူသည်သင်တို့ကိုယနေ့ညနှင့်မနက်ဖြန်ပြုပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့သိတယ်. သာဘုရားသခငျသညျမွကွေီးပျေါမှာအားလုံးခုနစ်ခုဘီလီယံကိုလူအကြောင်းကိုအများကြီးသိနိုင်.
ကျနော်တို့နေသောကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်သမ္မာကျမ်းစာကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဤသူကား. ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောတသည်နှင့်သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်သောကြောင့်. သူကကြှနျုပျတို့ပွုထက်ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသိတယ်
ဒီခြီးမှမျးဖြစ်ပါသည်! သူကကျွန်တော်တို့ကိုမကြိုက်ဘူးင်. ဘုရားသခငျသညျအထဲကအရာတစ်ခုခုကိုတွေ့ဖူး. သူကမှားခဲ့ဘယ်တော့မှမယ့်. သူကအံ့သြခဲ့ဘယ်တော့မှမယ့်. သူကဘာမှမသို့ကြည့်ရှုရန်မရှိခဲ့ဘူးင်. သူအပေါငျးတို့သဖြစ်ရပ်မှန်များရတဲ့ရှေ့တော်၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘယ်တော့မှင်. သူကအရာအားလုံးကိုသိတယ်!
ဖြစ်သင့်သည်. သို့သော်လည်းငါသည်ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့င့်အဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ကိုအခြို့ကိုယျ့ကိုယျကိုလည်းအလွန်အမင်းစဉ်းစား. ကြှနျုပျတို့သညျဤသုံးစုတစုကိုမေ့လျော့သောကြောင့်, ထိုအကြီးအကျယ်င်. ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းကျိုးပျက်နေကြောင်းကိုမေ့လျော့.
ကျနော်တို့ Broken န
ကျနော်တို့အံ့ဩဘွယ်သောလုပ်နေမသာ; ငါတို့သည်လည်းကျိုးပဲ့နေ. ကမျြးစာကိုကျနော်တို့ကသူ့ပုံရိပ်ကိုထဲမှာဘုရားသခင်ကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြပြောပါတယ်. ကျနော်တို့ကိုဘုရားသခင်အားအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောနှင့်ဿုံချိတ်ဆက်ခဲ့ကြ. သို့သော်ဤလောက၌အပြစ်ရှိ၏သို့ဝင်သောအခါအ, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးထိခိုက်. အကြှနျုပျတို့တပြင်လုံးကိုဖြစ်ဖို့အသုံးပြုနေစဉ်, ယခုကျွန်တော်တို့ကျိုးပဲ့နေ. ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုလဲကျဆင်းသွားခံရလှပသောကျောက်သလင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ပန်းပု. ဒါဟာအပိုငျးပိုငျးဖွင့်. အခုတော့ဒီရောဂါရှိတယ်, သေဆုံးခြင်း, လူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်နှင့်အဆိုးဆုံး.
ကိုယ့်ကိုမရှည်လျားလွန်းလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ iPhone ကိုရတယ်. ဒါဟာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်. ငါသည်ဤအသစ်တယောက်တယ်ရှေ့တော်၌တည်သော်လည်းငါ့ iPhone ကိုကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့သည်. ငါကအားလုံးအချိန်ကိုကျဆင်းသွား, ဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်အက်ကွဲခဲ့သည်. ဒါဟာတကယ်နှေးနှေးခဲ့. ဒါဟာအမြဲငါ့ကိုအပေါ်ပျက်ကျခဲ့. ငါသေးသော်လည်းအသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းအပေါ်ပိုက်ဆံဖြုန်းချင်ကြဘူး. တိုင်းယခုထို့နောက်ငါသည်ငါ့ဖုန်းကိုဘယ်လောက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအကြောင်းညည်းညူကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖမ်းမယ်လို့. ထိုအခါမူကားငါပြန်ဆဲလ်ဖုန်းဖြစ်ဖို့အသုံးပြုဘယ်လောက်မှသတိရချင်ပါတယ်. ငါလေပထမဦးဆုံးဆဲလ်ဖုန်းအရောင်ဖန်သားပြင်နှင့်အတူပထမဦးဆုံးသူမြား၏တစျခုဖွစျသညျ. ငါကအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်ထင်.
ဒါပေမယ့်ငါ့အတက် messed iPhone ကိုငါလေကြောင်းပထမဦးဆုံးဖုန်းကိုထက်တစ်သန်းကြိမ်ပိုကောင်းခဲ့. ငါကတက် messed စေခြင်းငှါသဘောပေါက်မယ်လို့, ဒါပေမယ့်နေဆဲအံ့သြဖွယ်င်. ဒါဟာနှေးနှေးနဲ့ Cracked ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သင်ဆဲ၎င်း၏ amazingness ၏ပုံရိပ်ကိုတကွက်ကြည့်ရှု. ငါဆဲပေါ်မှာကောင်းသောဓါတ်ပုံတွေကိုယူနိုင်ပါသည်. ငါနေဆဲကအင်တာနက်ပေါ်ရှိရနိုင်. ငါဆဲပေါ်မှာပစ္စည်းပစ္စယဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. ငါကအပေါ် app များနှင့်ဂိမ်းများရှိ. Apple ကကဖုန်းပေါ်မှာအံ့သြဖွယ်အလုပ်ကိုပြု. ဒါကဖုန်းကိုအံ့သြဖွယ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်လည်းကျိုး.
အလားတူလမ်းအတွက်, ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကအံ့သြဖွယ်အလုပ်ကိုပြု, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကျိုးကြ. သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမှာကြည့်ရင်, သင်ဆဲကျွန်တော်တို့အံ့သြဖွယ်သတ္တဝါတွေပါပဲပြောပြနိုင်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကျိုးပဲ့နေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်. ကျနော်တို့အစဉ်အမြဲကြာရှည်ပါဘူး. ကျနော်တို့ဖျားနာရသေဆုံး. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖမျက်သို့မှီထိခိုက်စေ. ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစမ်းသပ်ချက်အဘို့ပစ္စည်းပစ္စယမအောက်မေ့ပါဘူး. ကျနော်တို့အခြားသူများကိုထိခိုက်လာ. အကြှနျုပျတို့ဘုရားသခငျသညျပွစျမှား.
သငျသညျအစဉျအသငျသညျကျိုးပဲ့နေကြောင်းကိုအဖြစ်မှန်ကိုစဉ်းစားပါနဲ့? ကျွန်တော်တို့အများစုဟာကျနော်တို့ဒဏ်ငွေင်ယူဆကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအားဖြင့်သွား. ကြှနျုပျတို့ကိုပတ်ပတ်လည်အခြားမည်သူမဆိုထက်မဆိုကွဲပြားခြားနားသောမထင်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အရူးလုပ်ရ. သို့သော်အမှန်တရား, ကြှနျုပျတို့အားလုံးကျိုးကြ. ကျနော်တို့ကျိုးကြောင်းနှစ်ခုကိုမူလတန်းနည်းလမ်းများမှာကြည့်ရှုချင်.
ပဌမ, ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျိုးပဲ့နေ. ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်င့်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ပဲဒဏ်ငွေလုပ်နေလုပ်နေသောအထင်အမြင်အောက်မှာနေထိုင်. ကျနော်တို့သေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြေကွဲမဆိုနိမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြှနျုပျတို့ယူဆနိုင်ပါတယ်. ဒီတစ်ခါလည်းသေးငယ်တဲ့အရိပ်လက္ခဏာ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုလျစ်လျူရှု. ကျွန်တော့်ဇနီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Ford ကား Explorer ကိုမောင်းနှင်ခဲ့တဲ့အခါတူရဲ့. ဒါဟာဆူညံသံစေရန်စတင်, ဒါပေမဲ့သူမဖွင့်ပါကကားမောင်းထားရှိမည်. တစ်ဦးကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန် Chesapeake Bay ကိုမှမောင်းနှင်ခဲ့ကြနှင့်ဘီးနီးပါးပိတ်ထားဖဲ့. အဲဒီအစားနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလျစ်လျူရှု၏, ငါတို့သည်သူတို့သတိပြုမိဖြစ်သင့်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုလဲကမ္ဘာ၏ရငျးနှီးသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်သူကိုသမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်လူတစ်ဦးယောဘ. အရာအားလုံးသူ့ထံမှသိမ်းယူခဲ့သည်. သူ့အခွအေနကေိုအကြောင်းမြည်တမ်း၏အလယ်၌သူလူသားအားလုံးရဲ့နိုင်ငံတော်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်. ဤတွင်သူမိန့်င်:
“အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ဖွားမြင်သောသူသည်လူကိုကာလ၏အနည်းငယ်နှင့်ဒုက္ခနှင့်ပြည့်ဝ၏. သူကတစ်ဦးပန်းပွင့်နှင့်အနွမ်းများကဲ့သို့ထွက်ကြွလာ; သူတစ်ဦးအရိပ်ကဲ့သို့အပြေးမဟုတျဘဲဆက်လက်ရေးသားထားသည်။” (အလုပ် 14:1-2)
ယောဘသည်ငါတို့နေရသောနေ့ရက်ကာလအဆုံးမဲ့မဟုတ်ကြောင်းပြောနေ. ကျနော်တို့အသက်ရှင်ဖို့အနှစ်တစ်အဆုံးမဲ့အရေအတွက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ငါတို့ရှိသမျှသည်အချို့သောတနေ့သေရလိမ့်မည်. ကျနော်တို့ကပွင့်ကဲ့သို့လှပသောထွက်လာစေခြင်းငှါ, ငါတို့မူကားညှိုးနွမ်းလိမ့်မည်. သူညှိုးနွမ်းကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းပြောသွားလိုက်တဲ့အခါ, ငါတို့အလောင်းတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ပိတ်ပစ်လိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပမှုလည်းညှိုးနွမ်းခြင်းနှင့်ဆိုးရွားပါလိမ့်မယ်. သူတို့ဟာအမြဲအဖြစ်ကောင်းစွာအခုသူတို့ပြောသကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ရန်မသွားပါတယ်. ထိုအနောက်ဆုံးမှာငါတို့သည်သေလိမ့်မည်. သူသညျအရိပ်မှကျွန်တော်တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါ, သူသည်ဤဘဝအမြဲတမ်းမဟုတ်ကြောင်းဆက်သွယ်င်. ၎င်းသည်အဆုံးမှကြွလာ.
ငါပိုင်ခွင့်ယနေ့အချိန်မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးဖတ်: "Google ရဲ့သေခြင်းကဖြေရှင်းနိုင်သ?"ဒီဆောင်းပါးရည်မှန်းချက်ကြီးမားကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်. စကားပြောနှင့်မည်သို့ကြောင့်လများအတွက်ရိုက်ကူးဖို့ likes. သေမင်း၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကိုအဘယ်သူမျှမငွေပမာဏရှိပါတယ်. ဒါဟာဖြစ်ပျက်. သေခြင်းသို့ Google မှဖြေရှင်းပေးမနိုငျသောအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်.
ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်တော်တို့အံ့ဩဘွယ်သောလုပ်နေကြတယ်. ကျနော်တို့ဖန်ဆင်းခြင်း၏အများဆုံးအံ့သြဖွယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်, ဒါပေမဲ့အစဉ်အဆက်အကျဆုံးခြင်းကတည်းကငါတို့သည်လည်းကျိုးကြ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြေကွဲသောငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး. ယခုဒီတော့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောငါတို့လူငယ်အလောင်းကျွန်တော်တို့အစဉ်အမြဲရှိသည်လိမ့်မယ်အဘယျသို့ဖွစျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မယူဆသင့်ပါ. ဤသည်ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုဖို့အကြာတွင်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်မဟုတ်ငါတို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်.
"အဘယ်သူမျှမဖြောင့်မတ်, အဘယ်သူမျှမ, မတဦးတည်း; အဘယ်သူမျှမနားလည်; အဘယ်သူမျှမဘုရားသခင်အဘို့ကိုရှာတတ်၏. အားလုံးလမ်းလွဲကြပြီ; အတူတူသူတို့အချည်းနှီးဖြစ်ကြပြီ; အဘယ်သူမျှမကောင်းသောအမှုကို, မပင်တည်း. သူတို့၏လည်ချောင်းသည်ဖွင့်လှစ်သင်ျခြိုငျးဖြစ်ပါသည်; သူတို့လှည့်ဖြားဖို့မိမိတို့လျှာကိုသုံး. မြွေဆိုး၏အဆိပ်သူတို့နှုတ်ခမ်းအောက်. သူတို့နှုတ်မင်္ဂလာနှင့်ခါးသီးနှင့်ပြည့်ဝ၏. သူတို့ခြေအသှေးကိုသှနျးငှါလျင်မြန်; သူတို့သွားရာလမ်း၌အတွက်ပျက်စီးခြင်းနှင့်ဒုက္ခများမှာ, ငြိမ်သက်ခြင်းလမ်းကိုသူတို့သိရှိသည်မဟုတ်. သူတို့မျက်မှောက်၌ဘုရားသခငျ၏မကွောကျရှိ၏။ " (ရောမ 3:11-18)
ဤကျမ်းပိုဒ်သည်ပေါလုလူတိုင်းဘုရားသခငျသညျပွစျမှားပါခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းပြောနေတာကိုချွတ်စတင်သည်ဘယ်မှာရောမကမျြး၌ရှိ၏. ဒီမှာ, ဒီနေရာမှာအခြေခံအားဖြင့်ယုဒလူတို့ပြောနေတာင်, ဟုတ်ကဲ့ပင်သင်. ကြှနျုပျတို့အားလုံး.
“အကယ်စင်စစ်ကောင်းသောနှင့်ဘယ်တော့မှအပြစ်များကိုကျင့်သောသူသည်မြေကြီးပေါ်မှာတစ်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်မရှိ။” (ဒေသနာ 7:20)
ယခုငါတို့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူကောငျးထင်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတာစံသည်: အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်. ငါကောင်းတစ်သူတစ်ဦးရယ်အခြားလူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်တန်းဒါ. ငါကလူမသတ်ဘူး. ငါအကြမ်းဖက်သမားမဟုတ်ဘူး. ထိုကွောငျ့, ငါကောင်းတစ်သူတစ်ဦးပေါ့, မှန်သော? ကမျြးစာကိုအညီမပေး. လူ့ရှုထောင့်ကနေ, သငျသညျအကောင်းတစ်သူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်တာသေချာပါ. သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ကျွန်တော်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖြစ်သင့်သညျဘုရားသခငျရဲ့ရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ်.
အကြှနျုပျတို့အားဖြင့်သွားအဖြစ်, ကျနော်တို့တကယ်ကိုသူနှင့်အတူငြင်းလို့မရပါဘူး. ဒါဟာအားလုံးစစ်မှန်တဲ့င်.
တဖန်သင်တို့ကိုသူကျွန်တော်တို့ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းကို up-နားလည်မှုကို messed သောအမှုအောင်ရဲ့သတိထားမိမှာ, လည်ချောင်း, လျှာကို, နှုတ်ခမ်းများ, ပါးစပ်, ခြေရင်း, မျက်စိ-အားလုံးကို! ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခါတစ်ရံတွင်မကောင်းတဲ့အကျင့်တို့ကိုကျင့်သောသူလူကောငျးမဟုတ်ပါဘူး. ကျနော်တို့မကြာခဏပြစ်မှားသူကိုအပွစျရှိလူနေ. ကျနော်တို့ဖျားနာစိတျနှလုံးရှိ.
ကျနော်တို့ကဒီအမှန်တရားကိုနားလည်မကြာခဏဆိုသပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုနထေိုငျလမျး၌ဖွင့်မပြဘူး. ကြှနျုပျတို့ကိုခြိုးနေတာသိလို့ပြော, ငါတို့မူကားကျွန်တော်တစ်ဦးအခွအေနေ၌တရားမဟုတ်ပါဘူးဝန်ခံဖို့ဆန္ဒပါပဲ. တစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်တော်တို့ကိုစွပ်စွဲလာတဲ့အခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးတုန့်ပြန်, အစား Self-စာမေးပွဲ၏, ကိုယျ့ကိုယျကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အမြဲဖြစ်ပါသည်. ဒီတစ်ခါလည်းကျနော်တို့ငြင်းခုန်, ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့မယ့်အစားသူတို့ကိုအပြစ်တင်. ကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းကျိုးနေတာပါ, ထို့နောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကိုယျ့ကိုယျကိုဆနျးစစျသငျ့တယျ. သငျသညျချို့ယွင်းချက်င်, သောသငျသညျမှားစေနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်.
ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုအကြောင်းဒီ-ကျနော်တို့မိမိတို့အပြစ်၌အခြားလူအပေါ်ကိုဆင်းကြည့်ရှု. ကျွန်တော်တို့ကိုအသီးအသီးတို့သည်ကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ကယ်တင်ရှင်၏လိုအပ်ချက်အတွက်မပါလျှင်အဖြစ်. ဘယ်သူမှသူတို့သည်သင့်ထက်ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုနိုင်, သင်ကသူတို့ကိုထက်ပိုကောင်းပါတယ်ဟုမဆိုနိုင်. သူတို့သည်သင့်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားအပြစ်များကိုကျူးလွန်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တစ်ဦးစုံလင်သောကယ်တင်ရှင်၏လိုအပ်ချက်အတွက်အားလုံးကျိုးပဲ့သောအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုင်. တောင်မှပိုဆိုး, ကြှနျုပျတို့သညျကောငျးကငျမှရကိုယျ့ကိုယျကိုအပေါ်မူတည်.
ကျနော်တို့ကနှလုံးခွအေနအေရှိသည်နှင့်အရာခပ်သိမ်းမှလာရှိရာနှလုံးသည်. ဒါကြောင့်နီးပါးအဆိပ်သင့်ရရှိကြောင်းအေိုးတူရဲ့. သငျသညျသို့သွန်းလောင်းတိုင်းဖန်ခွက်အဆိပ်သင့်ရလိမ့်မည်. ဒါကြောင့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့မျက်မှန်သင်တို့၏အကြံအစည်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ကူး, လုပ်ရပ်, အလိုဆန္ဒများ, နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ. ဒါကြောင့်အားလုံးညစ်ညူး.
ကျနော်တို့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ရဲ့ထင်မပြစ်မှားဖို့အသုံးပြုပါတယ်, ဒါပေမဲ့က. သိန်ဘုရားသခင်ထံမှကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်သောအရာဖြစ်၏. သိန်ထာဝရအသက်ကိုရမှကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်သောအရာဖြစ်၏. ကျနော်တို့ကြောက်စရာလူသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့အခြေအနေများကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆိုးဆုံးရန်သူထင်စေခြင်းငှါ. ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပွုနိုငျကွောငျးကိုအကြှနျုပျတို့၏စစ်မှန်သောအဆိုးဆုံးရန်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒုစရိုက်ဖြစ်၏. အခြားအမှုအရာတစ်ရာသီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်, ဒါပေမဲ့ကွောငျ့အပြစ်တရား၏အကျွန်ုပ်တို့အစဉ်အမြဲအပြစ်ပေးခံရစေခြင်းငှါ. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခငျ၏ရန်သူကအပြစ်တရားရဲ့.
ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကကျွန်တော်တစ်ဦးလေးနက်သောရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖူးဘူးထင်. သို့သော်ဠာ၏အားလုံးအတွက်အဆိုးဆုံးရာဇဝတ်မှုဘုရားသခငျသညျပွစျမှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သူကတစ်ဦးရဲအရာရှိများ၏အခွင့်အာဏာထက်အများကြီးပိုမြင့်င်, ဒါမှမဟုတ်သမ္မတကြီး. သူသညျဘုရားသခငျဖွင်! အကြှနျုပျတို့အသတ်ခံကြပြီမဟုတ်ရင်တောင်, ကျွန်တော်တို့လိမ်ညာပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုဆဲသညျဘုရားသခငျဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်ခံထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏.
ကျနော်တို့ကျိုးကြေးမုံကဲ့သို့နေ. ဘုရားသခငျ့ပုံရိပ်ရောင်ပြန်ဟပ်, ငါတို့မူကားသင့်မကြိုက်ဘူး. ဒါကကျနော်တို့လုပ်ဖို့ခဲ့တယျ. အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့တစ်ဦးအရုပ်ဆိုးပုံပျက်ရုပ်ပုံကိုပြသ. ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်တပ်မက်ခြင်းမှလှည့်. လောဘမှအလှည့်ပေးတစ်ဦးအလိုဆန္ဒ. ကတိကဝတ်ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းသို့လှည့်. ဒါဟာလူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်မယ့်, နှင့်ဘုရားသခင်ကမုန်း.
ကျနော်တို့ကသာလူကောငျးကောင်းကင်ဘုံကိုသွားစဉ်းစား, ကသဘောအရစစ်မှန်တဲ့င်. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှကောင်း. ဒါကြောင့်ငါတို့ကသူတို့ရဲ့ကြည်ညိုသောစိတ်သည်ပေးရတစ်စုံတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်. ဒါကလူတစ်ဦးသညျယရှေုဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရာတည်အတွက်ငါတို့မြော်လင့်မထားနိုင်ဆိုလိုသည်. သူတို့ကကျိုးပဲ့နေနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းစေမည်. ကျနော်တို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး. ကျနော်တို့အတူတူကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ထည့်သွင်းဖို့ယရှေုကိုလိုအပ်ပါတယ်.
ကျနော်တို့ဝိညာဉ်ရေးကိုခြိုးသို့မဟုတ်ရုံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖဲ့ကြသည်မှန်လျှင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကသဘောတူညီချက်၏ကြီးမားသောတူမထင်လိမ့်မယ်. ရုံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ငါတို့သည်သေသောအခါကြှနျုပျတို့ကောင်းသောနေကြောင့်ဒဏ်ငွေင်. ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဝိညာဉ်ရေး, ငါတို့သည်သေဘယ်တော့မှသောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ဘုရားသခငျရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိသည်ဘယ်တော့မှ. ငါတို့သည်ငါတို့၏အပြစ်တရားနဲ့ကြောင့်မုန်းသောသူသည်သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ရပ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုကိုလမ်း.
သင်ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုပါတယ်သိလား? ကောင်းပြီသတငျးကောငျးသငျသညျကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူတစ်ဦးကယ်တင်ရှင်ရှိပါတယ်.
"ကယ်တင်ခြင်းမည်သူမျှမ၌တွေ့သည်, ငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရမည်ဖြစ်သည်သောလူသားတို့အားပေးသောမိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌အဘယ်သူမျှမကအခြားနာမဖြစ်၏။ " (တမန်တော်ဝတ္ထု 4:12)
ယရှေုသညျကျိုးသည်အဘယ်အရာကို restore နိုင်သူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်. သူကဘုရားသခင်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပူးပေါင်းနိုင်သူတစ်ဦးတည်းသာဖွင့်. သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့သာမြျှောလငျ့ခင်. ငါတို့ပုန်ကန်ဘို့အသေခံသောကြောင့်. သူကသင်္ချိုင်းမှထမြောက်. ကျနော်တို့ကဥပဒေကြမ်းတက်ဖရိုဖရဲင်. ယရှေုသညျကအားလုံးကိုပေးဆောင်.
သူကျွန်တော်တို့ကိုပြုသောကြောင့်ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဂရုစိုကျ. သူကငုံ့ဆဲသူ၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏ဦးရစ်သရဖူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိအမှတျပွု. ငါတို့မူကားကြောက်မက်ဘွယ်သောကျိုးကြောင်းရှုမြင်. ကျနော်တို့ကကယ်တင်ရှင်၏လိုအပ်ချက်အတွက်ပါပဲ.
သငျသညျဘုရားကျောင်းသွားပြီင့်သောကွောငျ့သငျသညျသင်ဒီမှာယနေ့ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအနေဖြင့်မယူဆသင့်ပါ. သင်တကယ်ကျိုးပျက်သောအသိအမှတ်ပြုကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျဘုရားသခငျသညျပွစျမှားသွားပါပြီ, သင်တစ်ဦးကယ်တင်ရှင်လိုအပျကွောငျး. သငျသညျအပွစျကိုမှလှည့်မနေတယ်ဆိုရင်. သငျသညျခရစျတျောကိုယုံကွညျကိုးစားမနေခဲ့လျှင်, ထို့နောက်သငျသညျဘုရားသခငျ၏ကလေးတစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး.
လာမည့် session တစ်ခုအတွက်, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သူ့မိသားစုသို့ကျွန်တော်တို့ကိုချမှတ်ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်. ရဲ့ဆုတောင်းစေ.
1. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဘယ်လိုလုပ်တတ်ကြောင်း? ဒါကြောင့်ယခုရက်သတ္တပတ်အဘယျသို့ခြားနားချက်စေမည်?
2. ဘယ်လိုကြောင့်အားလုံးကိုဘုရားသခငျကိုမွငျဟုသိမှတ်သင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲပါဘူး? ဘုရားသခငျသညျရငျးနှီးကျွန်တော်တို့ကိုသိတယ်ဘာကိုခြားနားအောင်ပါဘူး?
မိုက်ကယ်ကိုက် • မတ်လ 4, 2014 တွင် 9:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အယ်လန် • မတ်လ 5, 2014 တွင် 3:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်သင်၌ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူအလွန် good.May ခဲ့သည်.
Glore • မတ်လ 6, 2014 တွင် 11:23 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် bro. ငါအရမ်းကြောင်းလယ်ပြင်၌သင်တို့၏ဂီတနှင့်ပါရမီဘို့သင့်ကိုလူသိများပါတယ်. ဂရိတ်တရားဟောချက်. လာမယ့်အဘို့မစောင့်နိုင်သ.
ရှောလမုန်မင်းကဘုရငျ • မတ်လ 12, 2014 တွင် 6:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
MichaelSmith • မတ်လ 14, 2014 တွင် 12:34 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, နားထောင်ရန်ထိုကဲ့သို့သောအစိုင်အခဲဂီတရှိခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဤသွန်သင်ချက်တွေကိုအတှကျကြေးဇူးတငျ. သူတို့ကသင်ကြားရေးနှင့်အားပေးမှုများအတွက်နားထောင်ရန်အကြီးဖြစ်ရပြီ, ငါသည်ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီး ပေး. ဆက်လက်ဆုတောင်း, တနေ့ငါလူတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရကြောင်း.
Payne • မတ်လ 19, 2014 တွင် 7:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီအသည်ကြီး! ဘယ်အချိန်မှာလိမ့်မည်လာမည့်2ဗီဒီယိုများဖြန့်ချိလိမ့်?
Juan • မတ်လ 19, 2014 တွင် 10:49 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ်သတင်းစကားခရီးစဉ် lee စျြခွငျးမတ်ေတာသငျသညျအတူတူကအားလုံးကိုထားလမ်းတိုင်းကိုထိငါလှလှပပဖန်ဆင်းတာသိရသည်ကြီးလှပေသညျဘုရားသခငျကြွယ်ဝစွာသင်နှင့်မိသားစုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသော
Ariel • မတ်လ 25, 2014 တွင် 7:39 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအတရားဟောချက်ဖြစ်ပါသည်. တကယ်ပဲငါ့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါ၏လမ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်တကယ်မှားယွင်းနေကြောင်းသဘောပေါက်ကူညီပေးခဲ့သည်. ဘုရားသခင့တကယ်သင်အသုံးပြုနေသည်!
ထို့အပြင်ခရစ်ယာန် • ဧပြီလ 23, 2014 တွင် 1:16 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
လီယို • ဒီဇင်ဘာလ 11, 2015 တွင် 10:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်